Brazil iyo Colombia oo guuleysteen - BBC News Somali
Brazil iyo Colombia oo guuleysteen
29 Juunyo 2014
Image caption Geesiga ciyaartii Brazil iyo Chile ee xalay
Brazil ayaa ku badbaaday rigoorooyin ay kaga adkaadeen Chile si ay u gaaraan wareegga sideedda koox ama rubuc dhamaadka ciyaaraha, waxayna markale la ciyaari doonaan koox kaloo ka soo jeeda koofurta America ee Colombia.
Gool-haye Julio Cesar ayaa ahaa geesiga ciyaarta, waxa uuna shabaqa ka celiyay laba laat oo rigoorooyiinka ka mid ahaa.
Waxaa kaloo caawiyay Brazil guusha ay ka faa’ideysan waysay kooxda Chile oo kubadda si tartiib ah u tuuray iyo rajadii ugu dambeysay oo ay ku dhufteen birta goolka.
Image caption Ciyaarta ayaa ahayd mid aad u adag, iyadoo Brazil ay halis gashay
Taasi waxa ay noqoneysaa mid halis gelisay in Brazil inay kusii jirto tartamada ay marti gelineyso, iyadoo magaalada Belo Horizonte ay hogaaminaysay dal ay ku nool yihiin laba milyan oo qof oo ka cabsi qabay xalay inay neefta ku dhegto haddii ay kooxdooda ka harto ciyaaraha.
Goolhayaha ayaa ka qabtay laba gool kulaat oo ay tureen Mauricio Pinilla iyo Alexis Sanchez taas oo dhalisay in Brazil ay kusoo baxdo 3-2 gool oo rigoorooyiin ah.
Ciyaarta oo aad loogaga wanaagsanaa Brazil iyo 90-kii daqiiqo ku dhammaatay 1-1, waxaana lagu daray 30 daqiiqo oo dheeraad ah, haseyeeshee, labada koox oo ay ka dhexeyso xifaaltan taariikheed ayaa isla gaaray gool ku laatyo.
Image caption Labada koox waxaa ka dhexeeyo loolan muddo soo socday
Dhanka kale, Ciyaaryahan James Rodriguez ayaa xaqiijiyay inuu ka sii qeybqaadanayo tartamada ciyaaraha kubadda cagta ee FIFA eek a socdo dalka Brazil.
Kooxdiisa Colombia ayaa ka faa’ideysatay maqnaanshaha Luis Suarez, si ay uga adkaadaan Uruguay oo ay kula ciyaarayeen garoonka Rio.
Suarez ayaa muhiim u ahaa ciyaarta Uruguay si ay hormar u sameeyaan oo ay uga gudbaan wareegga 16 ka koox.
Colombia ayaa wajiheyso Brazil oo xalay la sheegayo inaysan u ciyaarin sidii lagu yaqaanay. Haddii Colombia ay ka faa’ideysato jileeca Brazil waxaa u suurta gali karto inay u gudbaan semi-final-ka ciyaaraha koobka aduunka ee Brazil ay marti gelineyso.
Image caption Rigooradii ugu dambeysay ee dishay rajada kooxda Chile
Image caption Dadka reer Brazil oo u dabaaldegaya guuldarada ay ka badbaadeen
Image caption kadib markii ay ciyaarta dhammaatay